पथरी जंगलमा मृत भेटिएकी महिलाको कस्ले गर्यो हत्या ? - Purbeli News
पथरी जंगलमा मृत भेटिएकी महिलाको कस्ले गर्यो हत्या ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण ०४, २०७५ समय: ७:३२:३३
मोरङ / मोरङको पथरी शनिश्चरेस्थित जंगलमा शुक्रबार मृत भेटिएकी झापा मेचिनगर धुलाबारी घर भै हाल काठमाडौ बस्दै आएकी ५२ बर्षकी साबित्रा खतिवडाको कस्ले हत्या गरी फाल्यो भन्ने अहिले सम्म खुल्न सकेको छैन । इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीेका अनुसार ति महिला गत माघ २९ गते घरबाट हिँडेकी थिइन् । घरमा मोबाइल छोडेर लुगा सिलाउनु जान्छु भन्दै घरबाट निस्केको बताइएको छ । मृतक महिलाका आफन्तहरु सम्पर्कमा आइसकेपनि उनलाई कस्ले यहाँसम्म ल्याई हत्या गर्यो भन्ने नखुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका इस्पेक्टर कमल बंजगाईले बताएका छन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले ८७ बर्षीय नरबहादुर क्षेत्रीको हत्यामा संलग्न रमेश राईलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । मृतक क्षेत्रीको माघ २८ गते मध्य रातमा उनकै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा हत्या भएको थियो । क्षेत्रीको २ तले पक्की घरको पुर्ब पट्टीको आफ्नै कोठाभित्र हत्या भएको अबस्थामा शव फेला परेको थियो । घटनाबारे २९ गते बिहान करिब साढे ७ बजे प्रहरीले खबर पाएपछि छुट्टा छुट्टै ३ वटा अनुसन्धान टोली परिचालन गरेको थियो ।